MOV file waa qaab multimedia QuickTime. Apple Computer u horumariyo inkastoo ay taageerto labada Windows iyo Macintosh ka hawlgala nidaamyada. Qaab file waxaa loo isticmaalaa si loo badbaadiyo kale ee jira faylasha video iyo sidoo filimada in a qalabka warbaahinta isticmaala. Sida aad qulquli ee internetka waxaad ka heli doontaa in inta badan files video yihiin qaab .mov. Noocan ah weel qaab waa u fududahay in ay soo bixi inkastoo mid ka mid ah ama ka badan xogta sida audio, saamaynta, subtitles ama video.
Ma waxaad isku dayay ciyaaro file .mov ku saabsan VLC oo aan ka ciyaari karaan? Hubi in aad la kulanto la faylasha qaar ka mid ah ayaan ahay. I hadh light qaar ka mid ah ha haddii aad weli mugdi ah haddii aad VLC ma ciyaari karo qaab noocaas ah. Tan iyo files MOV waxaa sameeyay computer Apple waxa ay leedahay waxay ka kooban tahay Apple naqshadeynta codec in lama jaanqaadi karaan dhamaan ciyaartoyda warbaahinta. Waxaa jira dhowr ah oo xal loogu this. Waxaad ku rakiban kartaa labada ciyaaryahan warbaahinta waa la jaan qaada codec ama aad aad u isticmaali karto app Wondershare fantastic loo yaqaan Wondershare Video Converter Ultimate. Tani waxay kuu ogolaanaysaa inaad badalo files MOV in qaab socon oo aad u ciyaari karaa Quick Time . Waxaad ka ciyaari kara .mov files isticmaalaya version Mac ama isticmaalaya version daaqadaha.
Qeybta 1: files MOV on Mac
Qeybta 2: files MOV on Windows
Ina keena aynu aragno sida uu u ciyaaro files MOV on Mac isticmaalaya MOV Converter Wixii Mac.
1 Download iyo rakibi App ah
Wondershare Video Ultimate Converter waxaa laga heli karaa online for download. Waxaad ka iibsan kartaa ama maxkamadda lacag la'aan ah. Markaas abuurtaan aad Mac.
2 dejinta file MOV in ay App ah
Fur software ku saabsan Mac. Markaas jiid file la doonayo MOV in aad rabto in aad ka ciyaaro app. Waxay ka muuqan doontaa sida tan.
3 Play file MOV ah
Ka dib markii ay soo jiiday file MOV ah, guji badhanka ugu sareysa tagay si ay u bilaabaan ciyaaro video ah. Waa in si fudud.
Wixii daaqado, sidoo kale waa qasabno yar inuu u ciyaaro file MOV ku on your computer. Raac tallaabooyinkan fudud.
1 Download ku Wondershare video Ultimate Converter for Windows
Software Tani waxay sidoo kale waxaa laga heli karaa rasmi ah Wondershare goobta. Download version maxkamad lacag la'aan ah ama waxa ay soo iibsato iyo soo bixi, waxa uu your computer. Hubi in aad ka soo bixi version daaqadaha.
2 Open iyo dajiyaan file MOV ah
Ka dib markii ay si guul ah ku rakibidda app, fur on your computer. Markaas jiid file loo baahan yahay MOV aad rabto inuu u ciyaaro si software ah. Waxaad sidoo kale riixi kartaa Files> dar Files. Its user interface ciyaar saaxiibtinimo oo aad si cad u arki karo tallaabooyinka.
3 toos ah Play files MOV ah
Ka dib markii ay ku daray files u video Wondershare Ultimate Converte r aad u baahan tahay in ay si toos ah u ciyaaro. Dul dulqabo in ay xaq u sareeya oo guji badhanka madow kuu oggolaanaysa in aad ciyaari Video ah. Riix si aad u bilowdo ciyaaro video ah. Laga soo bilaabo waxaa aad loo kordhiyo karaa shaashadda oo wuxuu ku raaxaysan daawashada dhammaan faylasha MOV in aad leedahay.
Waa in aad ka walwalin marka aad dhumbadaan file MOV ah tan kaliya aad u baahan cajiibka ah Wondershare Video Ultimate Converter.
> Resource > VLC > Waa maxay sababta aan VLC media player ciyaari doonaa .mov faylasha?